Sales&Marking Manager Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် / လှိုင်မြို့နယ်
Salary Rang : Above 700000
Sales & Marketing Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် / လှိုင်မြို့နယ် ။ • Car ပိုင်းတွင် Sales & Marketing Manager ရာထူးဖြင့် လုပ်သက် အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Sales & Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • English စာအနည်းငယ်ရရမည် ။ • အသက် ( ၄၀ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ • ဖယ်ရီရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၈း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • လှိုင်မြိုနယ်ရှိ Car Service Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Car Service Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number – 09 - 977397705 , 09 263121101 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 ,09 263121101 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကပျြ ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကပျြ
Salary Rang : 800000 - 1000000
၁)Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကပျြ ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကပျြ / ဗိုလျတဈထောငျမွို့နယျ ။ • Sales & Marketing ပိုငျးဖွငျ့လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ အနညျးဆုံး ( ၇ ) နှဈရှိရမညျ ။ • Sales & Marketing ပိုငျးကိုကြှမျးကငျြစှာလုပျကိုငျနိုငျသူဖွဈရမညျ ။ • ဘှဲ့ရဖွဈရမညျ ။ • Sales & Marketing နှငျ့ဆိုငျသော Diploma ( or ) Certificate ရရှိထားသူဖွဈရမညျ ။ • English စာရရမညျ ။ • အသကျ ( ၃၀ ) နှဈမှ ( ၃၃ ) နှဈဝနျးကငျြဖွဈရမညျ ။ • အလုပျခြိနျ မနကျ ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝနျထမျးဆောငျရပါမညျ ။ • စနေ ၊ တနင်ျဂနှေ ပိတျသညျ ။ GAS Recruitment နှငျ့ ခြိတျဆကျထားသော ဗိုလျတဈထောငျမွို့နယျတှငျရှိသော နိုငျငံခွားဖကျစပျသဈလုပျငနျးနှငျ့ အဆောကျအဦးအငှားမြားပွုလုပျသညျ့ Company ကွီးတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျရနျ အထကျပါဝနျထမျးမြား အမွနျအလိုရှိသညျ ။ မှတျခကျြ ။ ။ လေြာကျထားလိုသညျ့ရာထူးမြားကို တဈပါတညျးဖျေါပွပေးကွပါရနျ နှငျ့ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသား စှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေြာငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ ၊မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ )
Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်
၁) Sales & Marketing Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။ • Sales & Marketing ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၇ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • Sales & Marketing ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Sales & Marketing နှင့်ဆိုင်သော Diploma ( or ) Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • English စာရရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်မှ ( ၃၃ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော နိုင်ငံခြားဖက်စပ်သစ်လုပ်ငန်းနှင့် အဆောက်အဦးအငှားများပြုလုပ်သည့် Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Manager – Male/Female (5) Posts
Salary Rang : 700,000 - 1,000,000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ IT Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။
Sales & Marketing Manager – Male/Female (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက်) / လှိုင်မြို့နယ်
Bachelor’s Degree in Eco, BBN, BBA, • Master in Business or Marketing Preferred • Expert in the internet, Web, ICT service • Computer literate and fluent in English • Over3years experience in related field, experience supervising & managingaprofessional marketing staff. • Strong effective communicator, highly developed, demonstrated teamwork skills. • Demonstrated ability to see the big picture and provide useful advice and input across the company. • Familiarity and skill with the tools of the trade in marketing including PR, written communication, website development, market research, ICT service development, communication software products and creative services. • Experience in advising product teams about potential markets, desirable product features, go to market best practices and measuring the success of outreach and product sales • ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ • အလုပ်ချိန် (9:00 – 5:00 ) • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Manager – Male /Female (5)Posts
Salary Rang : 1000000
- MBA (or) နိုင်ငံခြားတွင် Sales ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူ - Experience3Years (or)5Years - Fashion ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိလျှင်ဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။